खुला सिमाको स्वरुप बदल्ने बेला आएको हो कि ? - Online Janata
विश्व मानचित्रमा नेपालको आफ्नै फरक पहिचान छ बुद्धको भुमि भनेर । नेपाल र भारतको सम्बन्ध प्राचिनकाल देखि रहेको भन्ने कुरा इतिहास जग जाहेर छ । नेपाल र भारत संग सम्बन्ध मात्र नभई रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा पनि भनिरहनु पर्दैन् । वर्तमान समय भनेको विज्ञान, प्रविधि र अर्थ को समय हो । जो सँग यी तिन कुराहरु हुन्छन, त्यो बलशाली हुन्छ अन्यथा शक्तिहिन हुन्छ ।
विश्व मानचित्रमा नेपाल र भारत जस्तो फरक किसिमको सम्बन्ध पाउन दुर्लभ नै छ । हाम्रो भेषभुषा, रहनसहन, खानपिन इत्यादिहरु मिल्दछ । नेपाल र भारत बिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । तर यी कुराहरु भनिरहदा खुला सिमाना मधेशको आर्थिक र साँस्कृतिक विकाशको लागि बाधा व्यवधान पैदा गरिरहेको त छैन भन्ने कुरा आम मानिसहरुमा सोच उत्पन्न भईरहेको छ ।
अबको बहस कसरी नेपाल र मधेशलाई समृद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने हुनुपर्छ । र त्यसको लागि हुने बाधाहरुलाई हटाउनु पर्दछ । कतिपय अर्धशास्त्रीहरुले के भन्दछन् भने नेपालको मुटु मधेश विकसित नहुनुको एउटा कारण खुला सिमाना पनि हो । फेरि प्रश्न उठन सक्छ नेपाल बिकसित नै छैन तर कसरी मधेश विकसित हुन सक्छ ? विभिन्न मानकहरुको तुलना गर्दा मधेश विकसित हुनु पर्ने हो तर त्यो छैन । खुल्ला सिमा भएकै कारणले राज्यले पाउनुपर्ने करिब अर्बौको राजस्व चुहावट भईरहेको छ । मधेशमा उत्पादित वस्तुहरुले लागतको अनुपातमा मुल्य पाईरहेका छैनन् । यस्को ज्वलन्त उदाहरण केरा रहेको छ । खुला सिमा भएकै कारण भारतीय केराहरु नेपालको बजारमा पर्याप्त आएकै कारणले मधेशमा उत्पादित केरा किसानहरुको लागत अनुसारको मुल्य पाइरहेका छैन । त्यही कारणले नवलपरासी पश्चिमका केही केरा कृषकहरु भन्सार कार्यालय अगाडी धर्ना दिएका थिए ।
त्यस्तै नियाल्ने हो भने कृषकले उत्पादन गर्ने वस्तुकाे लागत अनुसार मुल्य पाएकाे छैन । यसको मुख्य कारण भनेको भारतीय उपजहरुको नियमन नहुनु हो । भारतीय कृषकहरुले सरकारबाट विभिन्न किसिमका सहुलियतहरु प्राप्त गर्दछन र फलस्वरुप भारतीय उपजहरुसंग नेपाली कृषकहरुले प्रर्तिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यही उपजहरु नेपालमा भित्राइन्छ र नेपाली कृषकहरु मारमा पर्दछन् ।
यी घटनाहरुले गर्दा सिमालाई बन्द गर्नुपर्दछ र निश्चित स्थानहरुबाट आवागमन हुनुपर्दछ भन्ने मतहरु प्रकट भईरहेका छन् । अर्थात सिमा पुर्ण रुपले बन्द गर्नुपर्ने होइन, निश्चित नाकाहरुबाट तोकिएको वस्तुहरुको निर्यात र आयात मात्रै हुनुपर्दछ । हामी हेर्न सक्छौ र अनुमान लगाउन सक्छौ, सिमातिरका प्राय व्यवसायहरु फस्टाउन सकेका छैनन् । सिमातिरका व्यवसायहरु संघर्शरत छन् ।साथै सांस्कृतिक प्रभावहरु पनि परिरहेको छ । नेपाल र भारतमा मात्रै हेैन विश्वका अरु केही देशहरुमा समेत खुला सिमा छ तर स्वरुपहरु परिवर्तित छन् ।
खुला सिमा भएकै कारणले झन्डै अर्बौको घाटा नेपाललाई लागिरहेको छ । अर्थात प्रत्येक दिन विना भन्सार तस्करहरुले चोरी निकासी गराइरहेको अवस्था पाउन सक्छौ । देशलाई समृद्ध पार्न र मुद्रा घाटा कम गर्न स्वदेशी वस्तुहरुको उपभोगमा जोड दिनुपर्दछ । खुला सिमा देशको लागि वरदान हो भने देशले के पाएको छ ? हो जनताहरुले अलि कम मुल्यमा वस्तुहरु पाउँछन् तर देशको मुद्रा अवमुल्यनमा यसले जोड दिन्छ । देशमा भारतबाट वस्तुहरु ल्याउनाले नेपाली व्यवसायीहरुलाई धेरै असर गर्दछ र हामी प्रत्यक्ष रुपमा हेरिरहेका छौ ।
त्यति मात्रै हैन, खुला सिमाले विभिन्न किसिमका अपराध जन्य क्रियाकलापहरुमा यसले बल पुर्याइरहेको पाउन सक्छौ । केही व्यक्तिहरुले के मत राख्दछन् भने रोटी र बेटीको सम्बन्ध टिकाइराख्न खुला सिमा नै हुनुपर्दछ र ? केही विज्ञहरुले के मत राख्दछन् भने खुला सिमाको बहस चलाएर भोटलाई आकर्षण गर्ने साधन हो ।
हामीहरु अध्ययन गर्नुपर्दछ र हामी हेर्न सक्छौ खुल्ला सिमाले विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न गरेको छ । यि र यस्तै रुपी बहसहरुको सिर्जना गरी देशलाई बिकासतिर लम्काउने कुराहरुलाई स्विकार गर्नुपर्दछ । देश समृद्ध भए मधेश समृद्ध हुन्छ, देश डुब्यो भने मधेश डुब्छ ।
बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र विभिन्न धरातल रुपी भएको सुन्दर देश हो नेपाल । यस्ता सुन्दर रुपी शब्दहरुलाई जोगाईराख्न समृद्ध मधेश र देशको परिकल्पना गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता छ । बौद्धिक र जागरुक व्यक्तिवहरुले खुला सिमाको विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
लेखकः बलिराम गुप्ता नवलपरासी पश्चिम (शिक्षा, कृषि र अर्थ क्षेत्र )
Previous articleअझै सुचारू हुन सकेन गाैतम बुद्ध विमानस्थल
Next articleबिङ्गो खेलिरहेको अवस्थामा ७४ जना पक्राउ